Ny fantsom-pivarotana maotera enina XBC dia fitaovana famatsiana rano namboarin'ny orinasa anay araka ny GB6245-2006 fantsom-baomba nasionaly. Ampiasaina indrindra amin'ny rafi-pamatsiana ny afo amin'ny indostrian'ny solika, indostria simika, gazy voajanahary, orinasa famokarana herinaratra, trozona, tobin-tsolika, fitehirizana.
Ny paompy mpamono afo lava XBD mitsangana maharitra dia bika famolavola vita amin'ny famolavolana miorina amin'ny famoahana paompy vita amin'ny LC / X miorka lava, amin'ny toerana voalohany hanatsarana ny fampandehanana sy ny fahatokisan'ny rano ny paompy, izay mety indrindra ho an'ny famatsiana rano ny fiara. fototra.
XBD-DP andiany stainless vy manindrona ny multistage pump pumpist dia vokatra vaovao novolavolain'ny orinasantsika araka ny fangatahan'ny tsena sy ny fampidirana ny teknolojia mandroso any ivelany. Ny zava-bita sy ny fepetra ara-teknika dia mahafeno ny fepetra takiana amin'ny famoam-pahefana GB6245-2006.
Pompa afo tokana XBD tokana
XBD andian-tsindrimandry mpamonjy voina dia vokatra vaovao novokarin'ny orinasa anay araka ny fitakian'ny tsena. Ny asany sy ny fepetra ara-teknika dia mahafeno ny fepetra takian'ny GB6245-2006.
Ny paompy desulfurization KQTL (R) dia fantsom-bolo tokana miendrika haingam-pandeha tokana, novolavolain'ny vondrona Pump Kaiquan ho an'ny fitaovana fanadiovana desulfurization ny vovon-tsavony voaroaka amin'ny zavamaniry herinaratra.
KZJXL andian-dahatsoratra milentika amin'ny rano maloto no voatondron'ilay orinasa miorina amin'ny voatavo KZJL. Izy ireo dia cantilever-type tokana dingana tokana tsimoka voatavo sentimentugal.
Paompy slurry KZJ andiany, paompy tafo haingam-pandeha miendrika tazomoka, dia paozin'ny karazan-javaboary vaovao sy paompy miolakolaka izay noforonin'ny orinasa Shijiazhuang. Noho ny fangatahan'ny paompy slurry dia mihamitombo ny herinaratra herinaratra, metallurgy, injeniera simika, fitaovana fananganana.